Ukohlukanisa ukutshintsha, i-Insulator edibeneyo, i-Cable Cable-Histe
Shijiazhuang Imbali yombane Co, Ltd. imi e Shijiazhuang Lvdao Development Zone leyo ikufutshane Qingdao-Yinchuan Super Highway kunye tricyclic kuhola wendlela ngeenxa. Isixeko saseShijiazhuang sisiphambuka seBeijing-Guangzhou, iShijiazhuang-Taiyuan, iShijiazhuang-Dezhou kaloliwe. Ke ukuthuthwa kwayo kulunge kakhulu. Ifemu yasekwa ngo-1991 yenye yeefemu zokuqala ukuvelisa umatshini ohlukanisayo eTshayina.
Amava eminyaka engama-29
Ngaphezulu kwe-7 doctorate / bachelor
Iziphumo zonyaka zeeseti eziyi-100000 +
Umgangatho ophezulu wePow ...
Umgangatho ophezulu wombane wamandla wombane Arrester Zinc oxide compound sheath non-clearance surge arrester isetyenziselwa ukukhusela i-voltage-grade etshintshayo yangoku (AC) izixhobo zombane ezivela kumandla ombane ongaphezulu. Ipropathi yayo ekhuselayo ibalasele kwaye ukungcolisa umoya kuqaqambile kunye nevolumu yayo encinci kunye nokukhanya kobunzima. Ngenxa yokuba ingxowa yenziwe ngezinto eziphilayo ezinjenge-silicone irabha kunye ne-EP (i-epoxide) inokuphepha uhlobo oluthile lwengozi enkulu yokuqhushumba, kuba ...
Umgangatho ophezulu weVolthi ePhakamileyo ...
Umgangatho ophezulu weVoltage ePhakamileyo yokuTshintsha ukuGqibezela ngokubalula, iiparameter eziphezulu zobuchwephesha ziphezulu, zibanzi. Ukongeza, ububanzi bendawo yesicelo, inokusetyenziselwa ubeko oluphezulu. Indlela yokufaka iguquguqukayo. Ukuphakama: 1000m ~ 3000m Ubushushu bendalo: -30 ukuya kuma-40 ℃ (-40 ukuya kuma-40 ℃ kwiindawo ezikhethekileyo ezibandayo) Isantya somoya esingekho ngaphezulu kwe-700pa (Ilingana ne-34m / s) Ukunyikima kwenyikima engekho ngaphezulu kwe-8 degree. Ubungakanani bekhava ye-Ice ayikho ngaphezulu kwe-10mm yokufakwa kwendawo akufuneki ukuba ibe ne-inflamma ...
Umgangatho woXinzelelo oluPhezulu P ...
Umgangatho ophezulu weTension Polymer Suspension Insulators yokurhoxiswa ngokubanzi yenziwe ngezinto zokwambathisa (ezinje ngamalungu e-porcelain, iinxalenye zeglasi) kunye nezinto zentsimbi (ezinje ngeenyawo zentsimbi, iminqwazi yentsimbi, iiflanges, njl. Njl.) Ezinamathelisiweyo okanye ezibotshwe ngomatshini. iinkqubo zamandla. Ngokubanzi bangabangaphandle kobushushu kwaye basebenza phantsi kwemeko zemozulu. Abaqhubi bangaphandle abaphilayo bemigca yokuhambisa ngaphezulu, izityalo zamandla kunye nezitishi ezincinane, kunye ...
Ukulahla ukuPhuma kwiVo ephezulu ...
Ukulahla isixhobo sokulahla iVoltage ePhakamileyo yeFuse yokuPhuma fuse yenziwe ngezixhobo zokwambathisa kunye netyhubhu yefyuzi. Abafowunelwa engatshintshiyo esisigxina kumacala amabini inkxaso yokwambathisa kunye zoqhakamshelwano efakwe kwiincam ezimbini ityhubhu fuse. Ityhubhu ye-fuse yenziwe ngaphakathi ityhubhu yokucima i-arc, ityhubhu yephepha le-phenolic elingaphandle okanye ityhubhu yeglasi ye-epoxy.Ukuze uqhagamshelwe kunye ne-feeder engenayo yemigca yokuhambisa ikakhulu ikhusela isiguquli okanye imigca ukusuka kwisekethe emfutshane kunye nokulayisha ngaphezulu, kunye nokucima / ukulayisha ngoku. W ...
Ubushushu Shrinkable Protec ...
Ibhokisi yebhokisi yebhokisi yebhokisi yebhokisi yebhokisi yebhasi ye-MPH yebhokisi yebhokisi yebhokisi yebhokisi yebhokisi yebhokisi yebhasi yebhokisi yebhokisi yebhokisi yebhokisi yebhola eyenziwe nge-polyolefin i-irradiation enqamlezileyo ishushu yokutshisa ibhasi eyenziwe ngomshini. Ukubola kwebhasi yiasidi, ialkali, ityuwa kunye nezinye iikhemikhali. 2. Ukuphelisa impazamo yesekethe emfutshane ebangelwa ziimpuku, iinyoka kunye nezinye izilwanyana ezincinci. 3. Thintela ukwenzakala ngengozi okubangelwe ngumsantsa ...
Ubungakanani beemarike zehlabathi kumzi-mveliso wenguqu ziya kudlula kwi-100 yezigidigidi ngo-2020
Kwiminyaka yakutshanje, ukuhanjiswa kwamandla kunye nokusasazwa kwezixhobo kwimarike ngokubanzi kuyanda. Ukwanda kwesityalo, ukukhula koqoqosho kunye nokufunwa kwamandla kumazwe asahlumayo kuya kuqhuba imarike yenguqu yamandla kwihlabathi ukusuka kwi- $ 10.3 yezigidigidi ngo-2013 ukuya kwi- $ 1 ...
Isithembiso seNkonzo: Siyathembisa, izinga elifanelekileyo leemveliso li-100%, kwaye ixesha lewaranti yiminyaka emi-3. Thobela ikhontrakthi kwaye uzalisekise ngokunyanisekileyo imigaqo yesivumelwano: ukuhanjiswa kwangexesha, isaziso ngexesha lokuhanjiswa kwempahla kwelinye iqela ; Ndiqinisekile ...